Inona no ho hita ao Ibiza | Vaovao momba ny dia
Ibiza dia nosy iray izay an'ny Nosy Balearic ary tsy isalasalana fa iray amin'ireo malaza indrindra izy io. Misongadina izy io amin'ny fananana morontsiraka sy coves tsy misy farany misy rano turquoise, nefa koa ho an'ny fialam-boly fantatry ny alina sy antoandro. Nosy izay mandritra ny fahavaratra dia feno mpizahatany mitady fahafinaretana sy fialan-tsasatra amin'ny faritra mitovy. Nefa andao jerena izay azony atolotra antsika.
Ity iray ity ny nosy dia matetika mitsidika mandritra ny fahavaratra, satria amin'ny fotoam-pahavaratra izao manolotra fialam-boly bebe kokoa ho antsika. Saingy toerana mendrika hijerena amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona izy io. Nosy tsara tarehy misy mponina mahaliana izay avy amin'ny toerana mangina ka hatrany amin'ny meccas fizahan-tany any Espana.
1 Ivon-tantara manan-tantara Dalt Vila
2 Ny coves tsara indrindra any Ibiza
3 Tora-pasika Ibiza
4 Diniho ny filentehan'ny masoandro
5 Tsidiho ny tsena hippie
6 Mandehana fitsangatsanganana any Formentera
Ivon-tantara manan-tantara Dalt Vila
Ibiza dia tsy ny morontsiraka sy ny mahafinaritra ihany, satria manana tantara maro ihany koa. Dalt Vila no faritra manan-tantara izay nanambara ny vakoka manerantany. Ao Dalt Vila dia mila mandeha am-pitoniana eny amin'ireo arabe mideza ianao, jereo ireo arabe tery misy trano fotsy sy mijanona ao amin'ny Katedraly, ny Plaza de la Vila na amin'ireo fivarotana asa-tanana maro izay ho hitantsika. Afaka miakatra any amin'ireo bastions isika mba hahitana ny fomba fijery tsara indrindra eto amin'ny nosy ary hitsidika ny Punic nekropolis Puig des Molins ihany koa. Eo am-pototry ny rindrina no misy ny faritra La Marina, izay tena velona, ​​miaraka amin'ireo toeram-pialamboly sy fisotroana. Faritra fanjonoana taloha izy io izay manolotra fivarotana sy fialamboly betsaka ho antsika anio. Io no toerana mety indrindra hahitana akanjo adlib vitsivitsy, miaraka amin'ny lamaody Ibizan mahazatra.
Ny coves tsara indrindra any Ibiza
Tsy afaka mandeha any Ibiza isika raha tsy mankafy ny ondriny tsara indrindra, indrindra raha fahavaratra. Betsaka, fa anisan'ireo be indrindra malaza dia Cala Salada, miaraka amin'ny fasika volamena sy ny rano manjavozavo mahazatra ao amin'ny Nosy Balearic voahodidin'ny vato sy hazo kesika. Ataovy ao an-tsaina fa iray amin'ireo be atao indrindra eto amin'ny nosy izy ity, ka ho sarotra amintsika ny ho irery raha vanim-potoana lehibe izao. Cala Vadella dia iray amin'ireo malaza indrindra, voahodidin'ny rindrin'ny vatolampy miaro azy amin'ny rivotra sy ny rano turquoise. Sa Caleta, any amin'ny faritra atsimon'ny nosy, dia misy hantsam-bato sy fasika mena. Cala Aubarca dia manana andohalambo vato tsara tarehy izay noforonina noho ny fikaohon-tany ary ao Cala Bassa dia manana rano marivo aho mba hanaovana snorkeling.
Ary ny morontsiraka, manasongadina ny Playa d'en Bossa, izay iray amin'ny malaza indrindra eto amin'ny nosy. Ao no ahitantsika ny karazana fialamboly rehetra, misy serivisy sy trano fisakafoanana. Ankoatr'izay, eto amin'ity torapasika ity dia manana toerana mozika eo akaiky eo toa an'i Bora Bora na Sirocco isika. Etsy ankilany, manana an'i Es Cavallet isika, miorina ao amin'ny Reserve Reserve voajanahary Ses Salines, tora-pasika tsy manam-paharoa manana hatsarana lehibe. Izy io dia morontsiraka voajanahary arovan'ny dongom-pasika, na dia mahita serivisy maro aza isika izay mety tsy manintona ny fijeriny, miaraka amin'ny toeram-piantsonana, bara amoron-dranomasina ary faritra samihafa.
Diniho ny filentehan'ny masoandro
Ity nosy ity dia nisongadina hanolotra masoandro milentika tsara foana antenaina izany miaraka amina olona an-jatony. Efa misy toerana angano eto amin'ny nosy ahafahanao mipetraka sy miandry ny filentehan'ny masoandro. Ao amin'ny cove of Benirrás dia ho hitanao ny iray amin'ireo toerana malaza indrindra, miaraka amin'ny mozika hippie ao aoriana. Toerana malaza be izy io, ka amin'ny vanim-potoana avo dia tsy maintsy tonga aloha ianao mba tsy ho lany eo amin'ny habakabaka. Ny filentehan'ny masoandro malaza iray koa dia ny an'i Café del Mar ao an-tanànan'i San Antonio. Zava-dehibe iray hafa eto amin'ny nosy izy io ary manolotra mozika mangatsiaka manome manintona tokana ny zava-drehetra.
Tsidiho ny tsena hippie
Ity nosy ity dia toerana hipopotama nandritra ny enimpolo taona, talohan'ny fiakaran'ny fialam-boly sy fialamboly lafo vidy ankehitriny. Fa io hippie touch io dia mbola miaina amin'ny fomba maro, toy ny eny amin'ny tsena hippie mahafinaritra. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny Tsenan'ny parasy Las Dalias, ny antitra. Izy ireo ihany koa dia manome soso-kevitra ny Hippy Market Punta Arabí, ho iray amin'ireo tena marina eto amin'ny nosy ao Es Canar. Mazava ho azy, tsy maintsy mijery ny fandaharam-potoana ianao hahalalanao ny ora amin'ny andro sy ny andro ahitantsika ireo tsena ireo. Ilay any Las Dalias ohatra dia matetika amin'ny asabotsy na dia maharitra ny ora maro aza mandritra ny vanin-taona mafana.
Mandehana fitsangatsanganana any Formentera
Zavatra iray hafa azo atao mandritra ny eto Ibiza isika dia ny fitsangatsanganana mankany Formentera mpifanila vodirindrina amintsika. Nosy tsy manana seranam-piaramanidina izy ary azon'ny sambo entina. Formentera koa dia manolotra antsika coves sy morontsiraka marobe, toy ny Ses Illetes, Cala Saona na Es Pujols Beach. Toerana iray hafa tsy maintsy fakana sary anao dia ao amin'ny Lighthouse Cap de Barbaria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Ibiza » Inona no ho hita ao Ibiza
Tranifornia, tanin'ny hatsaran-tarehy sy zava-miafina